Baarlamaanka Soomaaliya oo maalintii labad ka doodaya ammaanka – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Baarlamaanka Soomaaliya oo maalintii labad ka doodaya ammaanka
STN News September 18, 2018 Leave a comment
Xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta waxay kulan kale ku yeelanayaan magaalada Muqdisho, kaasi oo daba socda kulankii shalay ee looga hadlayay amniga magaalada Muqdisho ee Caasimada ah.
27 mudane oo ka mid ah xildhibaanaadii ka qeyb galayay dooda ee uusan shalay waqtigu u saamixin ayaa maanta jeedin doona khudbadahooda ku aadan xaaladaha dalka Soomaaliya ee xiligaan gaar ahaan ammaanka magaalada Muqdisho.
Doodii shalay oo aheyd mid xasaasi ah ayaay xildhibaanadii jeediyay khudbaha intooda badan walaac ka muujinayeen xaaladaha ammaan ee magalada Muqdisho, waxayna xukuumadda ku dhaliileen inaysan wax muuqda ka qaban arimaha amaanka la xiriira.
Xildhibaan Caasho Koos oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegtay in xilliyada ay marayaan kontoroolada ay ku sugan yihiin ciidamada dowlada ay qariyaan aqoonsiyadooda, maadaama sida ay hadlkeeda u dhigtay aysan kalsooni badan ku qabin ciidankaaas.
Xildhibaan Xuseen carab Ciise oo isna ka tirsan gudiga amniga ee golaha sahcabka Soomaaliya ayaa sheegay in dhibaatada ugu weyn ee hada ka jirta dalka Soomaaliya ay tahay musuqmaasuqa oo la boobo hantida dadweynaha ayadoo aan musuqa wax laga qabana an amaanka la sugi
← Soomaaliya oo ka mid noqonaysa dalal ciimadmo u diraya dalka Sudan
Kenya: Siyaasiyiinta xisbiyada kala duwan oo kulamo hor dhac ah yeelanaya →